Ngokwe-KGI Apple inokumilisela i-iPhone entsha ye-5,2-intshi enesikrini se-OLED | Iindaba zeGajethi
Kwakhona sithetha ngamarhe ahambelana ne-iPhone elandelayo, unyaka obhiyozela isikhumbuzo seminyaka elishumi sokumiliselwa kwe-iPhone yokuqala kwintengiso kwaye kubasebenzisi abaninzi kufuneka ibe yinguqulelo yokwenyani Apho izinto ezintsha kufuneka zibaluleke kakhulu kushiye ukungabikho kweendaba zokuba u-Apple weemodeli zamva nje eziqaliswe yinkampani kwintengiso. Kwakhona, umhlalutyi we-KGI Securities ngumbhali wamarhe amatsha ahambelana neemodeli ezilandelayo ze-iPhone, iimodeli ezinokubona imodeli ephakathi iphakathi, phakathi kwemodeli ye-4,7-intshi kunye nemodeli ye-5,5-intshi.
NgokukaMing-Chi Kuo, I-Apple inokumisela imodeli ye-5,2-intshi ukubhiyozela isikhumbuzo se-XNUMXth ukusungulwa kwe-iPhone yokuqala ngo-2007. Le modeli ingasinika iscreen se-OLED esisi-intshi ezi-5,2, ngelixa iimodeli zangoku ze-4,7 kunye ne-5,5-intshi ziya kuqhubeka nokusebenzisa itekhnoloji yeLCD kwizikrini zabo. I-Apple iceba ukuqala ukusebenzisa izikrini ngetekhnoloji ye-OLED kwi-2018, nangona kubonakala ngathi ngonyaka ozayo inkampani esekwe eCupertino ifuna ukuqala ngokuthatha amanyathelo okuqala ngale teknoloji isinika imibala ebonakalayo ngakumbi ukongeza ekusetyenzisweni kwamandla ombane.
Umbono wokuphehlelela imodeli ephakathi yescreen phakathi kwee-intshi zangoku ze-4,7 kunye ne-5,5 iya kuvumela abafana baseCupertino thabatha umdla wabo bonke abasebenzisi abajonga ii-intshi ezingama-4,7 ezincinci kunye nee-intshi ezi-5,5 ezinkulu kakhulu. Le modeli intsha inokusinika iscreen esisebenza nge-5,2-intshi, kodwa eneneni esi sixhobo siza kudibanisa isikrini esine-intshi ezi-5,8, ngokwengxelo yayo yamva nje. Ezo-0,6 intshi umahluko ziya kuba semacaleni esixhobo ukuze zingabuchaphazeli ubungakanani besiphelo. Ukongeza, loo macala aya kusetyenziswa yi-Apple ukongeza imisebenzi ekhethekileyo yale modeli eya kufikelela kuluhlu lonke ku-2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ngokwe-KGI Apple inokumilisela i-iPhone entsha ye-5,2-intshi enesikrini se-OLED
Iminqweno emihlanu malunga neXiaomi ngokuqinisekileyo ubungazi